Alaab -qeybiyeyaasha Asiidhyada iyo Warshadda | Soo -saareyaasha Asiidhka Shiinaha
Fumaric acid, oo sidoo kale loo yaqaan fumaric acid, fumaric acid, purpuric acid ama lichenic acid, waa midab aan midab lahayn, guban kara, carboxylic acid oo ka soo jeeda butene. Fumaric acid waxay dhadhamisaa sida miro waxaana laga heli karaa Corydalis, Boletus, Lichen iyo Icelandic seaweed. Xirxirida: 1kg/boorso, 25kgs/durbaan (Laba baco oo gudaha ah iyo Waraaqo-durbaan ama sida macmiilku rabo Shel ...
Malic acid waa unug dabiici ah oo leh qaaciddada molecular C4H6O5. Waxay ka qayb qaadataa dhadhanka dhadhanka macaan ee miraha, waxaana loo adeegsadaa sidii cuntada lagu daro. Malic acid waxay leedahay laba qaab oo stereoisomeric (L- iyo D-enantiomers), inkasta oo kaliya L-isomer si dabiici ah u jiro. Malic Acid wuxuu leeyahay hygroscopic xoog leh, ku milmi kara biyaha iyo ethanol. Waxaa jira aashito macaan oo gaar ah. Dhadhanka Aalic Acid wuxuu u dhow yahay tufaaxa dabiiciga ah dhanaan, marka la barbar dhigo citric acid, leh aashitada, dhadhanka iyo jilicsanaanta, deganaanshaha dheer t ...
Xakamaynta Aashitada BP98 Fasalka Crystalline Powder 99%min Sodium Citrate
Cabbirka walxaha: 12-40mesh, 30- 100mesh darajada cuntada BP98/usp Xirxirida: 25kg/boorsada Nolosha shelf: 2 sano Baakadaha & Maraakiibta Baakadaha: 25kg/bac, 25mt/20′FCL Waqtiga Hoggaaminta: 10 maalmood kadib marka la helo prement Sodium citrate waa loo isticmaalo kor u qaadista dhadhanka iyo joogteynta xasilloonida maaddooyinka firfircoon ee cuntada iyo cabbitaanka ee warshadaha saabuunta, waxay beddeli kartaa Sodium tripolyphosphate oo ah nooc saabuun badbaado leh oo aloe loo adeegsan karo halsano, duritaan, sawir qaadis iyo dahaadhka biraha. (1) Warshadaha cuntada: ...
Acid Tartaric ah
Tartaric acid waa kiimiko cad oo dabiici ah oo dabiici ah oo ka dhacda dhir badan, gaar ahaan canab. Milixdiisa, bitartrate -ka potassium -ka, oo sida badan loo yaqaan kareemka tartar, ayaa si dabiici ah ugu kobcaya geeddi -socodka khamriga. Waxaa caadi ahaan lagu qasi karaa sodium bicarbonate waxaana loo iibiyaa sida budada dubista oo loo isticmaalo wakiilka khamiirka ee diyaarinta cuntada. Aashitada lafteeda ayaa lagu daraa cuntooyinka sida antioxidant -ka iyo inay siiso dhadhankeeda dhanaan ee kala duwan. Baakadaha & Dhoofinta Baakadaha: 25kg/bac, 20mt/20 & ...
Glycine (oo loo soo gaabiyo Gly) ayaa sidoo kale loo yaqaannaa amino-acetic acid. Caanaha kiimikada waa C2H5NO2, oo ah mid cad oo adag heerkulka qolka iyo cadaadiska. Waa asiidh amino oo leh qaabka ugu fudud ee taxanaha amino acids oo aan lagama maarmaan u ahayn jirka aadanaha. Glycine waa nooc ka mid ah asiidhyada amino-ka ah ee aan daruuriga u ahayn jirka bini'aadamka.Noo gaabin magacyada: Gly waa qaab-dhismeedka taxanaha amino-ka ugu fudud, jidhku uma baahna amino acid, kooxaha aashitada iyo asaasiga ah ee ku jira moodeelka, ca ...
Citric Acid Monohydrate/Citric Acid Biyaha
Citric Acid waxaa inta badan loo isticmaalaa wakiil dhadhan, ilaaliya cuntada iyo warshadaha sharaabka. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida antioxidant, balaastigga, saabuunta kiimikada, qurxinta iyo warshadaha saabuunta. Cuntada lagu daro, Citric Acid Monohydrate waa cunno lagama maarmaan u ah sahaydeena cuntada. Iyada oo ah hormuudka cuntada lagu daro iyo alaab -qeybiyeha cuntada ee Shiinaha, waxaan ku siin karnaa Citric Acid Monohydrate oo tayo sare leh. 9.Kaydinta iyo Gaadiidka: Waa in lagu kaydiyaa meel qalalan oo hawo ...